Marco Asensio Oo Jidh Dhis Cajiib Ah Sameeyay & Xiddiga Atletico Madrid Ka Tirsan Ee Macalinkiisa Lagu Tilmaami Karo - Gool24.Net
Marco Asensio Oo Jidh Dhis Cajiib Ah Sameeyay & Xiddiga Atletico Madrid Ka Tirsan Ee Macalinkiisa Lagu Tilmaami Karo
Garabka weerar ee kooxda Real Madrid ee Marco Asensio ayaa bilaabay inuu si wanaagsan jidhkiisa u dhiso isaga oo xerada jidh-dhiska kula saaxiibay saaxiibkiisii hore haatana qaybta ka ah Atletico Madrid ee Marcos Llorente.
Kaddib dhaawacii uu ku maqnaa mudada dheer, Asensio ayaa ka caawiyay Real inay horyaalka La Liga ku guuleysati halka Llorente oo dhawaan boos bedelis lagu sameeyay uu noqday mid ka ciyaara doorka weeraryahanka labaad.
Llorente ayaa lagu sifayn karaa inuu ahaa macalinka GYM-ka ee Asensio, walow aysan taasi ka dhignayn in xiddiga Atleti uu saaxiibkiisii Real baray qaabka jidhka loo dhiso haddana waxa xusid mudan in Llorente uu mudo dheer caan ku ahaa xalqado adag oo uu jidh dhiska ku qaato.
Labadan xiddig ayaa asxaab ku ahaa kana wada tirsanaa xulka qaranka Spain ee 21 sano jirada ka yar, walow ay awoodi waayeen inay wakhti badan kuwada ciyaaraan Real Madrid haddana kooxahooda ayay qaab wanaagsan ugu soo laabteen kaddib go’doonkii xanuunka Korona.
Llorente ayaa laba gool soo dhaliyay saddex kalena caawiye ka ahaa tan iyo soo laabashadii kubadda cagta halka Asensio uu saddex gool soo dhaliyay.
Waxa xusid mudan in habeenkii saamaynta weyn ku yeeshay waayaha ciyaareed ee Llorente uu ahaa midkii Liverpool ay kooxdiisu 3-2 kaga soo adkaatay kulan 16-ka Champions League ka tirsanaa oo Anfield ka dhacay.
Kulankaas oo uu Llorente oo bedel ku yimid laba gool iyo caawin ka sameeyay ayaa dhaliyay in tababare Simeone uu tayo gool dhalineed ka dhex arkay intaas kaddibna weeraryahan ahaan usoo adeegsanayay.